‘Voninahitra ho an’i Hong Kong’: Hira fanevan’ny hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy
'Vahoaka mihira ny fanafahana an'i Hong Kong, revolisionan'ny vanim-potoantsika!'
Voadika ny 18 Septambra 2019 6:03 GMT
Pikantsary avy amin'ny Youtube.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia dikanteny anglisy tamin'ny tantara amin'ny teny Shinoa navoaka tao amin'ny Stand News, fampahalalam-baovao tsy miankina ao Hong Kong, nivoaka tamin'ny 11 Septambra 2019. Navoaka tato amin'ny Global Voices izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tsingerintaona faha-70 an'ny Repoblika entim-bahoaka ao Shina ny 1 Oktobra. Raha miomana amin'ny lanonana ofisialy ny governemanta Hong Kong, Hong Konger an'aliny kosa no mampiseho hira fanoherana vaovao eny an-dalambe sy eny amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny tanàna.
Ilay hira, “Voninahitra ho an'i Hong Kong”, no nantsoin'ny mpiondana aterineto ho hiram-pirenen'i Hong Kong ary dika maro samihafa no nivezivezy tamin'ny aterineto. Eto ambany ny fampisehoana ôrikesitra misy ny hira fanoherana natolotry ny vondrona mpiangaly mozika sy mpanakanto any Hong Kong nitafy toy ny mpanao fihetsiketsehana:
Navoaka voalohany ho hitan'ny daholobe tamin'ny 31 Aogositra ny hira ary nalaza tamin'ny aterineto avy hatrany satria namoaka ny fihetseham-po sy ny fanahin'ny fihetsiketsehana ny tononkira [Fanamarihana: Nadika avy amin'ny dikan-teny navoaka ofisialy ny dikan-teny amin'ny teny anglisy etsy ambany]
Mampanantena izahay: Tsy hisy ranomaso intsony eto amin'ny taninay,
Amin'ny fanalana ny fahatezerana, ny fisalasalana, mijoro izahay.
Mitsangana! ianareo, izay tsy te-ho andevo indray:
Ho an'i Hong Kong, hanjaka anie ny Fahalalahana!
Na dia lalina aza ny tahotra misy,
Na dia mbola ny finoantsika aza no andehanantsika.
Avelao ho lasa lavitra ny hatezeran'ny rà! Mitombo hatrany ny feontsika:
Ho an'i Hong Kong, hanjaka anie ny Voninahitra!
Mety hanjavona ny kintana, rehefa mameno ny rivotra ny haizina,
Ao anatin'ny korontana, maneno ny trompetra tokana:
“Ankehitriny amin'ny tanana (na fitaovam-piadiana)! Ho an'ny Fahalalahana iadiantsika, amin'izay rehetra mety donintsika.
Miaraka amin'ny herim-po, fahendrena no irosoantsika! ”
Tapaho ny maraina izao, afaho i Hong Kong-ntsika,
Amin'ny fofonaina iraisana: Revolisiona amin'ny vanim-potoantsika!
Hanjaka anie ny vahoaka, mirehareha sy afaka, ankehitriny sy ho mandrakizay
Voninahitra ho anao, Hong Kong!
Mpihira mozika eo an-toerana eo amin'ny faha-roapolo taonany fantatra amin'ny anarana hoe “Thomas” ilay mpamoron-kira ao ambadiky ny hiram-pirenen'ny tanàna. Mpikambana ao amin'ny tarika iray eo an-toerana izy, ary na dia namorona hira pop-rock marobe aza izy teo aloha, dia ity no hirany klasika voalohany.
Ny hevitra ao ambadiky ny hira dia ny hamorona singa iray mety hanintona ny fanahin'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong ary hampiray azy ireo. Nitodika tamin'ny hiram-pirenena sy mozika ady hafa ny mpamorona, ao anatin'izany ny Battle Hymn of the Republic (Hiran'adin'ny Repoblika) sy ny Gloria in Excelsis Deo, ho fanondroana ny hirany.
Tamin'ny 26 Aogositra, namoaka ny demo tao amin'ny forum LIHKG tahaka ny Reddit i Thomas, manasa ny mpiserasera mba hanome hevitra. Nohavaozina ny gadona sy ny tononkira, ary nampiana ny teny filamatry ny fihetsiketsehana “Afaho Hong Kong, Revolisionan'ny fotoana” ary nangataka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny LIHKG mba hanampy amin'ny fandraketana ny hira. Telo andro taty aoriana, mpikambana 20 mahery ao amin'ny LIHKG no niseho tao amin'ny studio mba handrakitra ny hira.
Amin'ny alàlan'ny hira, te handefa izao hafatra manaraka izao ny mpamorona:
Ao anatin'ny ady ny vahoaka ao Hong Kong ankehitriny ho fiarovana ny feon'ny fieritreretan'ny vahoaka, ny rariny sy ny fahalalahana. Ho ady maharitra izao ary tsy voafetra eny amin'ny arabe, na ao amin'ny Filankevitra mpanao lalàna amin'ny lalàna sasany ny ady. Momba ny soatoavina sy ny fitondran-tenan'ny vahoaka izany. Tsy voafaritry ny tombotsoan'ny olombitsy intsony ny olona ao Hong Kong, misy zavatra lehibe kokoa noho ny vola ary mihoatra noho ny aina.
Nandray anjara tamin'ny ankamaroan'ny fihetsiketsehana tao anatin'ny roa volana lasa i Thomas saingy tsy loha-laharana amin'ny hetsika izy. Raisiny toy ny fitaovam-piadiany tsara indrindra ny mozika :
Fitaovana tena lehibe ny mozika. Tany URSS teo aloha, nifehy mafy ny mozika ny governemanta satria fantany fa afaka mampifandray ny fon'ny olona sy hikasika ny olona amin'ny fomba mahomby kokoa noho ny teny, ny teny filamatra sy ny sary ny mozika.
Hatramin'ny namoahana azy voalohany, olona an'aliny no nandray anjara tamin'ny flash mob tany amin'ireo tranombarotra lehibe manerana an'i Hong Kong. Ity ambany ity ny iray tamin'ireo fampisehoana tao amin'ny TaiKoo City Plaza tamin'ny 9 septambra:
Ao amin'ny #TaiKoo amin'izao fotoana izao— nohirain'ireo Hong Kongers ao amin'ny toeram-pivarotana Cityplaza ny Hiran'ny Tolona#HongKong. Tena mahafinaritra!#聽出耳油
Lahatsary tamin'ny Telegram#AntiELAB #HongKongProtests pic.twitter.com/ZZZLPDosqJ
Rehefa nohiraina nandritra ny fifanintsanana Amboara Manerantany tamin'i Iran ny hiram-pirenena Shinoa tamin'ny 10 Septambra, nohorakorahana izany. Nandritra ny fiatoana, nihira ny “Voninahitra ho an'i Hong Kong” ireo mpanohana baolina kitra tao Hong Kong ho solon'izany:
Nihira ny hiram-pirenentsika HK “願榮光歸香港” “Voninahitra ho an'i Hong Kong” tao amin'ny kianjan'i HK ny mpijery rehefa nifaninana tamin'i Iran tamin'ny Amboara Manerantany i HK.
#hongkong #HKprotest #HKprotesters #FreedomHK #FreeHK #FightForFreedom #standwithhk #standwithhongkong #WorldCupQualifiers #glorytohk isika